I-Eagle's Paradise - Umbono onegumbi - I-Airbnb
I-Eagle's Paradise - Umbono onegumbi
Port Hadlock-Irondale, Washington, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Dana
Nethezeka ngasemgodini womlilo kusihlwa, ujabulele ukushona kwelanga okuhle njengoba izinkozi nezinyoni zasogwini zindiza phezulu. Zizwa i-Tiny House ehlala endaweni eyimfihlo ebheke i-Hadlock Marina kanye nezintaba ze-Olympic. Ukuhamba izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, kayaking kanye nokuhlanganisa ogwini konke kungakapheli imizuzu embalwa, noma uvakashele i-Port Townsend futhi uvakashele ezinye zemibukiso yayo yobuciko, izitolo, izindawo zokudlela ezinhle kanye nezindawo zewayini zendawo.
Indlu encane ibekwe endaweni yayo yangasese, ngaphandle nje komgwaqo othule, oyitiyela, nofile. Indlu izungezwe indawo ye-patio, lapho ungahlala khona futhi uphumule ubheke itheku. Indlu encane inombhede ojwayelekile wendlovukazi endaweni ephezulu. Ikhishi elincane linefriji elincane, i-microwave, i-kuric coffee maker kanye ne-toaster. (izitsha zokupheka nezitsha zokudla ziyathengiswa). Kunendlu yokugezela encane eneshawa. Indawo yokuhlala inetafula nezihlalo kanye nesihlalo sothando esincane esinomshini wokulala.
4.99 · 207 okushiwo abanye
Indawo yethu ithulile, izimoto ezincane kakhulu (izimoto ezi-3 kuya kwezi-4 ngosuku). Amabhishi ayimfihlo futhi sithemba ukuthi izivakashi zethu zizokuhlonipha lokhu. Kukhona ibhishi lomphakathi eliqhele ngamamayela angu-1/4. Futhi izindawo eziningi zasolwandle ongazihlola.
Siyathanda ukwazi izivakashi zethu nezindaba zazo, ngakho ubudlelwano bazo kuzoba yinketho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Port Hadlock-Irondale namaphethelo